10 Mazano mari kutanga mabhizimisi pachako CBD yenyu
Kutanga Business / CBD
Zvingava zvomuzvarirwo kumhanya kubva CBD pamusika isati yapera, asi mirayiridzo iyi kana uchida kutanga achitevedzera uye kwete splat.
Image chikwereti: OlegMalyshev | Getty Images
Muvambi Joy Organics
7 Ndira 2019 6 Maminitsi kuverenga
Zvinofungwa varehwa mipiro Green Entrepreneur zvavo.
Zviri nyore kuona zvingakwanisa of CBD indasitiri kuwedzera. Kuvaka simba muchiso ari pamusika yakazara ndizvo zvakaoma kupfuura zvose. In nezvekutanga rwangu muchiso CBD, Ndakadzidza zvakawanda kuburikidza kutongwa uye kukanganisa. Nepo Mazano aya hakusi iko kubudirira kwako, tinotarisira zvichakubatsira kudzivisa zvakafanana misungo uye akaisa iwe munzira kutsanya uye inobudirira kanda.
Related: How kutanga uye kutengesa kambani yenyu CBD
1. Kuwedzera zivo yako
Nzwisisa kuti chaizvoizvo CBD ndiye danho rokutanga mukuumba anobudirira muchiso. kwandiri, izvozvo zvakatanga dzinotevedzana Google tsvakiridzo, kudzidza zvose tinogona pamusoro CBD: kunobatsirei, nhoroondo, ayo siyana dzokubudisa kwacho, uye zvakawanda. Ensuite, takasangana nyanzvi dzakawanda uye mamwe chikamu makambani. Zvakatora mwedzi miviri kutsvakurudza usati kuziva zvakakwana pamusoro chigadzirwa kuwana Provider. Izvi akatibvumira kuti achiziva zvisarudzo sezvo isu akatevedza.
Tinokurudzira vatsva ose indasitiri CBD kuverenga muperekedzi wedu Ultimate CBD . This guide rine mashoko akazara pamusoro CBD, nhoroondo, ayo kugadzirwa kunobatsirei utano. Uyu rakaisvonaka danho rokutanga kuwedzera zivo yako.
2. Tora danho
Kana uchida zvechokwadi kutanga mabhizimisi pachako CBD yenyu, unofanira kutanga. Takataura kuvanhu vakawanda vakasarudza, achipedza nguva kuti kuongorora nemauto uye kuedza kuita sarudzo zvose zvakakwana. zvakanyatsonakanaka, havana chinhu.
Usarega zvakakwana kukuchengetai mberi. Unofanira kuziva (ona pamusoro), asi haufaniri kuziva zvachose mune zvose pane kuziva. Wana chigadzirwa yako kumusika. Uchadzidza zvakawanda zvaunofanira kuziva se uye.
3. Sarudza zita renyu zvakachenjera
Chii modaidza boka rako CBD achava guru zvazvinoita yako kukwanisa kuenderera mberi. The chokwadi chinosuruvarisa nhasi ndechokuti nemabhangi havadi kushanda nemunhu anotengesa CBD. Si le nom de votre entreprise contient les mots “CBD”, “chanvre”, “cannabis” ou toute autre référence explicite à CBD, mubhengi zvimwe zvinoratidza kutora basa renyu kumwewo.
Sarudza kuti asingaiti kusimudza tsvuku mireza ane zita uye unogona kuva nyore. Ndiani anoziva bhizimisi rako uchaona akafanana nemakore mashanu kana gumi? Nous avons choisi “Joy Organics” parce que c’était simple, nyore kuyeuka uye nyore kuperetera. Asiwo kunosvika nyore kune dzimwe zvinogadzirwa, kusanganisira avo kuti hazviiti pamwe CBD.
A noti yekupedzisira: Kana ukaona zita akakwana, asi iwe ukaona kuti Website haasi kuwanika, unogona kuva nemhanza. Kana Website ndiye anoishandisa asi haina kushandiswa, onana muridzi kuona kana achida kutengesa. Zvinokosha zvinodiwa kuti zita rakanaka.
Related: 6 mibvunzo usati zita renyu Cannabis kambani
4. Ita LLC wako
Wakaisa LLC wako mangoti une zita renyu. Izvi hazvifaniri kuva dzinodhura uye zvinotyisa muitiro. Taiwanzogara kugadzira Legal Zoom tatsveyamisa. Iri raiva yakachipa pashiri sarudzo uye akatora zvishoma 20 maminitsi. chikumbiro chedu akatumwa pakarepo uye vaiva watinoshandira kuzivikanwa nhamba iri 10 mazuva. Zvechokwadi pakanga pasina chikonzero kubhadhara yakakurisa mari nokuda danho iri.
5. Zvogogadzirwa Logo yako
With nzira dzakawanda kuwanika, Danho iri nyore uye asingauyi kudhura uwane. Misika paIndaneti akadai Fivver kana 99 Designs zvinopa mazana akazvimirira vagadziri mabasa. We akaenda 99 vanodhirowa. Basa kunoita kuti kuisa pachako mutengo yenyu, ipapo muchapiwa mimwe vagadziri pose. Iwe nekudzikisa zvabuda kuti Logo kuti zvifambe iwe. Izvi zvinotora anenge matatu kusvika mashanu mazuva asi inogona anodhura pane Fivver.
6. Zvogogadzirwa website yako
Web site Magadzirirwo imwe nharaunda umo makambani matsva anogona kuti Musanyura. Hazvina zvakafanira kusika website idzva kubva muvare. Wana pamusoro Google uye kutsvaga mhando. Shandisa vakasununguka kana chipa kufanana WordPress, Squarespace ou Wix. Find anogadzira anogona kushandisa template ichi uye kuzadza nokuripisa kugutsikana uye nezvifananidzo.
Zvinokosha kuti danho iri: CBD mabhizimisi haagoni Parizvino kushandisa Shopify avo mungoro yekutengera. Tinokurudzira kushandisa WooCommerce pachinzvimbo.
7. Nokusanangura zvakanaka naye
Uyu ndiwo mumwe sarudzo inokosha uchaita kana kutanga bhizimisi rako DBC. In Brick uye dhaka yedu chitoro, 50% zvose kokushambadzira kwedu kunobva vakavimbika vatengi. mabviro yedu yechipiri rwemotokari zvokusumwa. sei? Nekuti vanhu vanoda zvabuda vanowana, saka vakauya shure kwemamwe.
Nzira yakanakisisa kukundikana kuri kupa chigadzirwa asingashandi. muchiso Your kuchakura sezvo vanhu vanoramba kutenga.
Related: 5 kiyi kusarudza zvakanaka retailer CBD
8. Find CBD vakafunga processor
Zvinokangaidza zvikuru chikamu hwomukova Mufaro Organics raiva sangano redu mushambadzi nhoroondo. In the US, pane zvinoshamisa vashomanana nemabhangi yokubata okutengesa pamusoro CBD. The indasitiri iri zvakazara kutiza ikozvino: vanhu vachakuudza chinhu, zvino vatendeuke uye kuita mumwe. Unofanira kungwarira kuti akabvarura kure.
Uye haukwanisi chete kushandisa Square kana mumwe kurapwa kambani dzakakurumbira: havangagamuchiri tengesa CBD. Pane izvozvo, unofanira kuwana processor kuti anoita kugadzira zvakananga CBD. zvimwe, unofanira kutsvaka processor inobva muna US.
Kana ukaedza mumwe processor kunze kwakavakirwa (UK, Mexico uye Asia dzakakurumbira nzvimbo), uchaona kuti anenge 30% rokutengesa enyu achaitwa vakaramba. Hafu makasitoma izvi vachanditi zvavo kambani kadhi, vanoti harisi munyengeri, uye harizodzoki kupedza tenga kwavo. ari 15% dzasara akarasika okutengesa. zvimwe, mumwe mutengi achapiwa mutengapwe yechikoro kunze. Hapana ichi ezvinhu akavaka ukama hwakanaka.
9. Tanga dzakakurumbira zvigadzirwa
Nepo zviri vachiidza kusika pachako Masvomhu yenyu, regai kuwira mumusungo uyu. ruzivo Our, zvigadzirwa izvi havana kutengeswa. Omerera zvinogadzirwa kuti kutengesa zvakanakisisa.
pari zvino, Dhayi ndiwo inonyanya kufarirwa mhando CBD zvigadzirwa. Wechipiri muri capsules. Izvi zviviri muri nzvimbo huru kutanga. Yeuka kuti chinangwa chako ndechokuti kuenda kumusika. Kamwe iwe Yakasimbiswa, unogona kutanga kuedza zvishoma yakaonekwa kuti ndeyechokwadi zvigadzirwa.
A musika mumaruva anopa vashandi yeUnited vakasununguka uswa panguva shutdown nguva